नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदी सरकारले गरेको हो- मणिशंकर | सिमान्तMarginal नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदी सरकारले गरेको हो- मणिशंकर – सिमान्तMarginal
नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदी सरकारले गरेको हो- मणिशंकर
Posted on7Dec 20159Dec 2015 by Jesi | INCOMESCO
भारतका मणिशंकर, करण सिंह जस्ता नेताहरुले नेपाल र नेपाली जनतालाई वर्तमान भारतीय सरकारले लगाएको नाकावन्दी स्विकार गर्दै नेपाली जनताका प्रती सहानुभुति प्रकट गरेका छन । उनिहरुलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ, तर यिनिहरुले पनि यो कुरा उठाउन निकै ढिलो गरे । यसबाट भारतको आन्तरिक राजनीतिमा केही प्लस माइनस होला तर भारतले नेपालको यो पुस्तालाइ पूर्णत: चिड्याएको छ, त्यो फर्कन अब असम्भव छ ।
सोमबार , (7-12-2015) भारतीय राज्यसभामा भएको नेपालसम्बन्धी छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै भारतीय कंग्रेसका नेता मणिशंकर यैयर, जो मनमोहन सिंहको पहिलो मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री थिए ।
हामीले हाम्रो संविधान १२२ पटक संशोधन गर्न सक्छौं भने नेपाललाई किन विश्वास नगर्ने कि, उनीहरुले संविधान जारी भइसकेपछि पनि संसोधन गरेर असन्तोषको माग पुरा गर्नेछन् । संविधान घोषणापछि संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएको छ र सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । संविधानका बिषयमा केही मुद्दाहरु छन्, तीनलाई संसोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरिसक्यो ।
परराष्ट्रमन्त्रीज्यू, यो तपाईको विदेश नीति हो भन्ने विश्वास नै लाग्दैन । तपार्इँको बक्तब्य पढ्दा निकै मिठो लाग्छ । को जिम्मेवार छ यस्तो व्यवहारका लागि ? चुप्पी तोडो । यो ब्यबहारका कारण नेपालको एउटा सिंगो पुस्तालाई हामीबाट ढाटा धेकेलेका छौं । के यही हो म्याडम तपाईको बिदेश नीतिको रणनीतिक उदेश्य ?
५ बर्षमुनीका ३० लाख बालबालिका मृत्युसम्मको खतरामा छ भनेर युनिसेफले भनेको छ, यो ठूलो मानवीय संकट हो । नेपालसँग जोडिएका धेरै रुट छन् । एक वा आधा मात्र अवरोध छन् । अरुबाट किन नपठाउने ? हामीले नेपाल जाने अर्को बाटो भेट्टाउन सकेनौं ? एयर लिफ्ट गर्न सक्दैनौं ?
नेपालसँग सम्वन्ध सुधार गर्न व्यक्तिगत सम्वन्धलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । करण सिंहलाई छान्नुस् । ताकि उहाँले भन्न सक्नुहोस् नाकाबन्दी मोदी सरकारले गरेको हो, भारतले होइन ।
नेपालसँग अर्को बाटो छैन् । यदि हामीले त्यसो गरेनौं भने नेपालसँग कुनै बिकल्प छैन् भन्ने हैन् । नबिर्सौं, नेपालसँग तिब्बतको नाका पनि जोडिएको छ । के हामीले आन्दोलनकारीको पक्ष लिएका छौं ? त्यसो हो भन्ने कुरा नेपालभित्र मात्र हैन, भारतका बिभिन्न तप्कामा पनि बिश्वास छ । यदि हामीले त्यसो गरिरहेका छौं भने स्थितिलाई झनै खराव बनाउँदै छौं ।
सर्बदलीय टोली पठाउनेबारे यो संसदमा सहमति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मलाई लाग्छ व्यक्तिगत सम्वन्धलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । मनमोहन सिंहले बिपक्षी नेताहरुलाई समेत प्रयोग गरेर सम्बाद गरेका थिए, सीताराम यचुरी र सरद यादवको सहयोग लिएका थिए, तपाई किन गर्नु हुन्न ? तर, हामी तपाईको यस्तो प्रबृत्तिको साक्षी बनेर जाँदैनौं सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलमा । ब्यक्तिगत सम्पर्कलाई उपयोग गर्नुस् ।
तपाईँ करण सिंहलाई छान्न सक्नुहुन्छ यो कामका लागि । ताकि उहाँले भन्न सक्नुहोस् नाकाबन्दी मोदी सरकारले गरेको हो । भारतले होइन । उनीहरुलाई क्षति भारतले हैन कि मोदी सरकारले मात्र पुर्‍याइरहेको छ । यो सन्देश नेपालीलाई दिनुपर्छ ।
यदि तपाईँ नेपालीलाई थप हानी पुर्‍याउन चाहानुहुन्न भने छिटोभन्दा छिटो प्राविधिक टीम पठाउनुस् र कसरी नाका खोल्ने, एयर लिफ्ट गर्ने भनेर अध्ययन गर्नुस् । द्वन्द्व बढाउने काम नगर्नुस् । यो नविर्सनस्, ५ लाख मधेसी काठमाडौं छन् । असल छिमेकी बन्न छाडेर यदि तपाई आन्दोलनकारीलाई मात्र सहयोग गरिरहनुहुन्छ भने तपाईँले जसलाई सहयोग गर्छु भनीरहनुभएको उनीहरुलाई खतरातिर धलेलिरहनुहुनेछ ।
१९८४ मा श्रीलंकामा जे भयो त्यस्तो नेपालमा नदोहोर्‍याउँ । नेपालीहरुलाई उत्तेजित नपारौं । भारत सरकार नेपाली जनताको हितका बिपक्षमा छैन भनेर सन्देश दिने यही सवैभन्दा सही मौका हो । यदि हामीले त्यसो गरेनौं भने हामीले नेपाल मामिलामा चीनसँग हार्नेछौं र नेपाली जनतालाई बर्षौ बर्षसम्म हाम्रो बिपक्षमा धकेल्ने छौं ।
Translation Source http://www.onlinekhabar.com/2015/12/359799/#sthash.aygTuozW.dpuf
Posted in नाकावन्दी, भारत, विविध, संबिधानTagged नाकावन्दी, नेपालको राजनीति, प्रजातन्त्र र बिकास, बिकास, भारत, मानव अधिकार, मेलमिलाप, षड्यन्त्र, संघियता, संबिधान2 Comments
Previous Postनयाँशक्ति: छिमेकिको नितिलाई पहिचान गर्ने सवालबाट हेर्दाNext Postपछाडिबाट छुरा हाने
2 thoughts on “नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदी सरकारले गरेको हो- मणिशंकर”
Pingback: देशको अवस्था हेर्दा मिक्स्ड फिलिङ हुन्छ | सिमान्तmarginal